ZTE Axon 9 Pro gosipụtara na TENAA nwere atụmatụ dị iche iche
Izu gara aga, n’oge IFA 2018, ZTE nyere ZTE Axon 9 Pro ọhụụ ọhụụ, mmelite nke ZTE Axon 7. Na mgbakwunye na ikpughe ngwaọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara nkọwa ya niile.
Na mbido taa, Axon 9 Pro nkọwapụta nkọwa pụtara na peeji nke asambodo TENAA ma achọtala mgbanwe abụọ na-atọ ụtọ.
ZTE Axon 9 Pro nke emere n’oge IFA 2018 gosipụtara a Ihuenyo 6.2-inch, Snapdragon 845 processor, 6 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa na-enweghị ike ịgbasa. Gụnyere batrị 4,000 mAh, ihe mejupụtara igwefoto azụ abụọ (12 MP na 20 MP) tinyere igwefoto selfie (20 MP).
TENAA depụtara nkọwa akọwapụtara ihe niile enyere na IFA ma e wezụga isi abụọ, nke mbụ bụ RAM, na ndepụta ahụ enwere okwu banyere ụdị abụọ na 6 GB na 8 GB, mgbe ihe omume ahụ kwuru banyere otu ngwaọrụ nwere 6 GB nke RAM. Na mgbakwunye, akpọrọ aha abụọ dị iche iche gbasara nchekwa, ụdị 64 GB na mbipute 256 GB, na-adaberekwa na nke e gosipụtara na IFA nke 128 GB.
Ọ bụghị ihe ọhụrụ na enwere ụdị dị iche iche nke otu ngwaọrụ nwere RAM na nchekwa dị iche iche, ihe dị ịtụnanya bụ na ZTE ekwupụtaghị ụdị ndị a n'oge IFA, ọbụlagodi mgbe ọ nweghị ihe ọ bụla gbasara ụdị ahụ nwere njirimara ka mma.
O nwekwara ike ịbụ na ndepụta TENAA ezighi ezi na enwere naanị otu ọdịiche nke ZTE Axon 9 Pro, ma ọ bụ ma eleghị anya, ZTE ga-ahapụ ụdị dị mma na nke dị ala n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 9 Pro gosipụtara na TENAA nwere atụmatụ dị iche iche